Maka fiirsasho la'aan baa ka muuqato hadallada Goodax Barre? - BBC News Somali
Maka fiirsasho la'aan baa ka muuqato hadallada Goodax Barre?
Wasiirka Waxbarashada dowladda federaalka ee Soomaaliya, Cabdullaahi Goodax Barre ayaa raaligelin ka bixiyay hadal uu ka jeediyay magaalada Jowhar oo la xiriiray imtaxaannaadka ka socda Puntland.
Xilli uu ku sugnaa Jowhar oo uu kulamo kula lahaa madaxda maamulka Hirshabeelle, Ardeyda iyo waalidiinta, ayuu wasiirku sheegay in "imtaxaanka Puntland uu fashilmay".
"Imtaxaan waa fashilmaa. Saacaddaan la joogo, Puntland imtaxaanka aad qaadeysid wuu fashilmay. Waddamada deriska ah waa ka fashilmaa, Adduunkana wuu ka fashilmaa. Laakiin inta aan fashil ahaanta u dhowaanin fiiriya", ayuu yiri wasiirka.
Balse Wasiirka oo warsaxaafadeed soo saaray ayaa raaligelin ka bixiyay hadalkaasi ah in imtaxaanka Puntland uu fashilmay.
Imtaxaanka iskuullada Puntland waxaa u fariisatay illaa 16 kun oo ardey, waana mid ka duwan imtaxaanka wasaaradda Wabrashada Soomaaliya. Wasaaradda waxay dooneysay in imtaxaan mideysan laga qaado iskuullada dalka oo dhan, laakiin maamullada qaar ayaa diiday arrintaas.
Warqadda waxaa lagu yiri "Wasiirka waxa uu ka xunyahay hadalkii uu ka jeediyay magaalada Jowhar kaas oo ku saabsanaa in imtaxaanka dowlad-goboleedka Puntland uu fashilmay".
Balse waxaa looyeelay cudurdaar in wasiir Cabdullaahi Goodax Barre uu dhoho hadalkaasi ka careysiiyay maamulka Puntland iyo ardeyda wax ka barata deegaannadaas.
"Wasiirka oo ku guda jira hadaljeedinta… ayaa lagu wargeliyay in madaxweynaha dowlad-goboleedka Puntland uu ku dhawaaqay in imtaxaanka la jabsaday", ayaa lagu xusay warsaxaafadeedka.
Qodobkaasi koobaad ee qoraalka wasaaradda ka soo baxay ayaa lagu soo qaaday "in ay habooneyd in wasiirka uu raadiyo xaqiiqada warkaas", waana mid ka mid ah arrimaha ay ku eedeeyeen siyaasiyiinta ka fikirka duwan Xildhibaan Goodax Barre.
Warka ka soo baxay wasaaradda waxbarashada Soomaaliya ayaa lagu qoray in wasiirka uu garab taagan yahay ardeyda, waalidiinta iyo dhammaan shacabka Puntland.
Laakiin dadka dhalleeceeya wasiir Goodax Barre waxay ku eedeynayaan in uusan ka fiirsan hadallada uu jeediyo marka uu ka hadlayo arrimaha xasaasiga ah ee Soomaaliya.
Haddalladii hore ee muranka dhaliyay
Wasiirka waxbarashada Soomaaliya oo ah xildhibaan ka tirsan Baarlamaanka Soomaaliya ayaa dhowaan xildhibaannada qaar ku tilmaamay in ay "Al-shabaab yihiin".
Waayihii hore way adkeyd in la arko siyaasiyiin isku eedeynaya ka mid ahaanshaha Al-Shabaab iyo kuwa dowladda ku eedeynaya in laamihii amniga ay ku dhex milmeen rag katirsan Al-Shabaab, balse maalmihii la soo dhaafay waxaa aad usoo shaac baxay siyaasiyiin kala fikir duwan oo haddana isku eedeynaya ka mid ahaanshaha kooxda Al-Shabaab, taas oo ah arrin aan horay looga baranin.
Xildhibaan Cabdullaahi Goodax Barre oo ka dhex hadlayay xarunta golaha shacabka xilli halkaas uu buuq ka dhashay arrimaha amniga uu ka tagnaa, ayaa qaar kamid ah xildhibaanada golaha shacabka ku eedeeyay in ay ka shaqeyaan danaha kooxda Al-Shabaab ee baarlamaanka dhexdiisa.
"Al-Shabaab waxay rabeen in fowdo ay barlamaanka ka dhacdo, waxaa u sahlay dad sheeganaya inay xildhibaano yihiin, ficilkooduna uu Shabaab ka u adeego, waa dad shabaab u shaqeeya", ayuu yiri xildhibaan Goodax Barre.
Waxaa sidoo kale xigtay in xildhibaan Zakariye Gaashaan oo ka mid ah mudaneyaasha golaha shacabka uu taliyaha hay'adda nabadsugida iyo sirdoonka qaranka Soomaaliya, Fahad Yaasin weydiiyay su'aal ahayd in hay'addaasi ay ku dhex milmeen rag katirsan Al-Shabaab, maadaama taliye ku xigeenkii hore ee NISA uu horay u xaqiijiyay arrintaasi.
In dhinacyada uu midba mid ka kale ku eedeeynayo inuu yahay Al-Shabaab ayaa ah astaan muujinaysa in ay isku kalax-tegayaan, oo xitaa sababi karta in taageerayaasha iska soo horjeeda ay ku daydaan.
'Cimilada kulul oo hoos u dhigta natiijada waxbarashada'
Maqal Shirkii waxbarashada sanadlaha Puntland oo Garoowe ka furmay